Semalt इस्लामाबाद विज्ञ: एनालिटिक्समा रेफरर स्पाम के हो र यसलाई कसरी रोक्ने?
यदि तपाईंले गुगल एनालाइटिक्स खातामा अप्रत्याशित ट्राफिक र रेफरल स्पाम फेला पार्नुभयो भने, यसको मतलव तपाईंको साइटलाई स्प्यामरहरू मार्फत मारिएको छ। यो वेबमास्टरहरू, मार्केटरहरू, ब्लगरहरू र सोशल मिडिया प्रबन्धकहरूको लागि बढ्दो समस्या हो किनकि रेफरर स्पामले तपाईंको साइटको स्तरलाई बिगार्न सक्छ र बेवास्ता गर्न गाह्रो छ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको विशेषज्ञ सोहेल सादिकबाट यी सम्वन्धित सल्लाहहरूमा तल जानुहोस्।
रेफरर स्पाम क्रॉलर, माकुरा, र बट्स द्वारा सिर्जना गरिएको हो तपाईंलाई रेफरल साइटहरूमा आकर्षण गर्ने र तपाईंलाई अनलाइन उत्पादनहरू खरीद गर्न आग्रह गर्ने मनसायले। यस स्पामले तपाइँको साइटको एनालिटिक्स स्टेटलाई लक्षित गर्दछ र भर्खरका वर्षहरूमा बढेको छ। एक नयाँ रेफरर स्पाम जुन हालैमा सुरू गरिएको थियो link.zhihu.com हो। यदि तपाईं यो यूआरएल वा यस्तै भेट्नुभयो भने, तपाईंलाई पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गरिनेछ जहाँ स्पामकर्ताहरू तपाईंलाई तिनीहरूको उत्पादनहरू किन्न वा उनीहरूको सामग्री अनलाइन प्रचार गर्न चाहन्छन्। प्राय: रेफरर स्पामको उद्देश्य भनेको इन्टरनेटमा भाइरसहरू र मालवेयर प्रमोट गर्नु हो, र स्प्याम लिंकहरू भ्रमण गर्दा र तिनीहरूलाई अनलाइन ब्राउज गर्ने क्रममा तपाईं होशियार हुनुपर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूको गुगल एनालाइटिक्स खातामा उनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि रेफरर स्पाम हानिकारक हो किनभने यसले तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक बढाउँदछ, तर तपाईं गलत हुनुहुन्छ। बट्स र माकुराहरूले यस प्रकारको ट्राफिक उत्पन्न गर्दछन्, र तपाईंले प्राप्त गरेका हिटहरू वास्तविक हुँदैनन्। स्पष्ट रूपमा, यसले तपाईंको बाउन्स रेट बढाउनेछ र तपाईंको वेबसाइटमा बिताएको समय शून्य दोस्रो हो। भूत ट्राफिकले तपाईंलाई सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्दैन र गुगल एनालाइटिक्स डाटाको साथ अव्यवस्थित हुनेछ। रेफरर स्पाममा निर्भर गर्दै एक कालो टोपी SEO रणनीति हो र गैर-वैध कम्पनीहरू र सेवा प्रदायकहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
कसरी रेफरर स्प्याम रोक्न?
तपाइँ सजिलैसँग रेफरर स्पामलाई तपाइँको Google एनालिटिक्स खातामा देखाउन रोक्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईंले फिल्टरहरू बनाउनु पर्छ र शंकास्पद र कम-गुणवत्ता ट्राफिक बहिष्कृत गर्नु पर्छ। त्यस प्रकारको ट्राफिक बहिष्कार गर्न, तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताको प्रशासन भागमा जानुहोस् र फिल्टर विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ, तपाइँ फिल्टर थप्नुहोस् विकल्प छनौट गर्नुपर्दछ जसले कि विजार्ड सुरु भयो। अर्को चरण भनेको फिल्टरको नाम darodar.com, link.zhihu.com, वा यो केहि बनाउनको लागि छ। यो प्रविधिको साथ सबै रेफरर स्पाम URL हरू लाई बाहिर राख्नु भएको निश्चित गर्नुहोस्, र बहु URL हरू पनि सजिलैसँग फिल्टर गर्न सकिन्छ। कस्टम फिल्टर विकल्प छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि फिल्टर फिल्ड सेक्सन अभियानको स्रोत चयन गर्नुहोस्।
यहाँ तपाईले darodar.com, वा link.zhizhu.com फिल्टर फिल्टरको पाठमा पनि समावेश गर्नु पर्छ सबै कुरा हटाउन। फिल्टरहरूमा बहु यूआरएलहरू थप्न सम्भव छ; यसको लागि, तपाईंले एक यूआरएल निर्दिष्ट गर्नु हुँदैन र तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा ग्लोबल वा क्षेत्रीय रेफरल स्प्याम फिल्टरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। फिल्टरहरू सेट अप गरेर र मेहनती भई, यो तपाईं सम्भव छ तपाईंको गुगल एनालिटिक्स डाटाको शुद्धता र गुणस्तर सुधार गर्न। तपाईं आफ्नो र तपाईंको साइटलाई डज र शंकास्पद URL हरूबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र धेरै हदसम्म सन्दर्भकर्ता स्प्यामको अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबैले समय लिने छैन, र परिणामहरू सँधै उत्कृष्ट हुन्छन्, त्यसैले तपाईं आफ्नो गुगल एनालिटिक्स खातामा सबै संदिग्ध यूआरएलहरूको लागि नयाँ फिल्टरहरू सिर्जना गर्न जारी राख्नुपर्दछ।